Tokony hampiasa iPad ve ny ankizy? | Vaovao IPhone
Tokony hampiasa iPad ve ny ankizy?
Ny teknolojia vaovao dia lasa mora idirana ao an-trano ary midika izany fa afaka miditra amin'izy ireo koa ny zaza ao an-trano. Ny fahamoran'ny fampiasana sy ny katalaogin'ny fampiharana ho an'ny ankizy dia nahatonga ny iPad sy ny takelaka hafa hijanona ho fitaovana natao hampiasain'ny zokiolona hampiasain'ny ankizy kely ao an-trano. Tsy nisy izany tamin'ny solosaina birao na solosaina finday, indrindra noho ny vidiny sy ny fahasarotan'ny fampiasana azy ireo. Saingy tsy ny iPad ihany no manana andraikitra mitarika ao an-trano, fa mihatratra hatrany hatrany amin'ny sekoly, ary any amin'ireo ivon-toerana maro dia efa fitaovana iray miasa hafa io. Aroso ny fifanolanana: Tokony hampiasa takelaka ve ny ankizy? ¿Misy vokany eo amin'ny fianarany sy ny fivoarany? Tsy miombon-kevitra velively ny manampahaizana ary misy ny hevitra isan-karazany.
Ny American Academy of Pediatrics sy ny Canadian Pediatric Society dia namoaka tatitra milaza fa voafetra ny fampiasana teknolojia vaovao ny ankizy. Ny zaza latsaky ny 2 taona dia tsy tokony hampiasa izany mihitsy, eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona dia tokony hampiasa azy io adiny iray isan'andro fotsiny, ary ny ankizy eo anelanelan'ny 1 sy 6 taona dia adiny roa isan'andro fotsiny. Anisan'ny antony ferana io fidirana io dia:
Ny fitomboan'ny ati-doha haingana alohan'ny roa taona dia mety miteraka fientanam-po tafahoatra ka mitarika amin'ny fikorontanan'ny fivelarana toy ny tsy fahampian'ny fiheverana, fahatarana kognitifa sns
Ny fahatarana fampandrosoana vokatry ny fihenan'ny fihetsiketsehana, izay mety hisy vokany eo amin'ny fianarana.
Ny fiterahana noho ny tsy fisian'ny fampihetseham-batana.
Tsy fahampian'ny torimaso noho ny fampiasana teknolojia vaovao ao amin'ny efitranony, very torimaso ora maro.
Ny aretin-tsaina toy ny fahaketrahana, ny tebiteby, ny aretin'ny bipolar, ny autisme ary ny aretina.
Fihetsika mahery setra noho ny fampiasana atiny mahery setra.
"Dementia nomerika" hijerena atiny haingam-pandeha.
Fiankinan-doha amin'ny teknolojia vaovao.
Fampisehoana taratra taratra: Ireo finday finday sy fitaovana tsy misy tariby hafa dia nosokajian'ny manam-pahaizana sasany ho fitaovana "mety ho karsinogenika" (fanasokajiana 2A). Na dia tsy misy ny firaisan-kina amin'ny raharaha, dia misy ny fandinihana manolotra azy.
Tsy maharitra: ny ankizy no ho avy ary tsy afaka manohy mampiasa teknolojia vaovao be loatra.
Ny antontan-taratasy dia tsy mitatitra afa-tsy ireo lafy ratsy izay tokony hamerana ny fampiasana teknolojia vaovao, saingy tsy misy na inona na inona voalaza momba ny lafy tsara. IPads (sy takelaka amin'ny ankapobeny) dia nanokatra varavarana vaovao ho an'ny fianaran'ny ankizy. Ny boky mifanakalo dia ohatra iray monja amin'izany. Ahoana ny fampitahana ny sary amin'ny solaitrabe amin'ny sarimiaina na horonantsary eo amin'ny takelaka takelaka? Tsy tokony ho tsara lavitra ve ny hahafahan'ny ankizy mifampiresaka amin'ny atiny fa tsy ny mpijery pasif fotsiny ao am-pianarana?
Ny teknolojia vaovao dia nanova ny fomba filalaovan'ny ankizy, saingy manimba ve izany? Isika izay ray aman-dreny izao dia nahita fa tamin'ny fahazazantsika sy fahatanorantsika dia nisy firesahana momba ireo ankizy nandany ora sy ora maro teo alohan'ny fahitalavitra "nitelina" izay rehetra natolotry ny "boaty adaladala". Tsy hianjera amin'ny hadisoana lehibe milaza aho fa ny fandaniana ora mitovy eo imason'ny takelaka dia tsara kokoa noho ny fanaovana azy eo alohan'ny fahitalavitra, satria na ny zavatra iray na ny iray hafa dia tsy misy tolo-kevitra, fa ny tombony azo amin'ny fanaovana zavatra izay tsy mazava? mitaky ny sainao sy ny fidiranao an-tsehatra manoloana ilay zavatra hafa izay ny zavatra ilaina fotsiny dia ny passivity-nao?.
Fampiasana voalanjalanja ny teknolojia vaovao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny tokantrano tsy misy isalasalana fa ny zavatra tena azo atolotra indrindra, ary tsy avela ny iPad ho mpitaiza sy mpampianatra ny zanatsika. Ny tolo-kevitr'ireo fiarahamonina siantifika roa dia tena zava-dehibe tokoa ary tokony hahatonga antsika hieritreritra mihoatra ny iray amintsika raha toa ka tsy be loatra amin'ny taonany ny fampiasana ny zanatsika amin'ny teknolojia vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tokony hampiasa iPad ve ny ankizy?
Avereno jerena ireo mpandahateny Wireless Muvo 20 sy Sound Blaster AXX200